မြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလှမယ် ထားထက်ထက် ရဲ့“သမ္မတကြီးထံသို့ ပေးစာ” - Sa Ka War
မြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ပြသနာတွေကို အလှမယ်ထားထက်ထက်က “သမ္မတကြီးထံပေးပို့စာ” လို့အမည်တပ်ကာ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အလှမယ်ထားထက်ထက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွမ်းဘားအားကစားကို ကစားလာသူဖြစ်ပြီး အခုအချိန်မှာ အလှမယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကော ကျွမ်းဘာနည်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အားစိုက်လုပ်ကိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အားကစားလောကမှ တာဝန်ရှိ လူကြီးများနှင့် အားကစားလောကကို တကယ် တိုးတက်စေလိုသော လူကြီးမင်းများ သိရှိ အရေးယူနိုင်ပါစေရန် ထားထက်ထက် အနေဖြင့် ကျွမ်းဘားအားကစားကို အသက် ၅ နှစ်မှ စတင် ကစားခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်တိုင်တိုင် နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင်အဖြစ် SEA GAMES ပြိုင်ပွဲတွေအထိယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ နည်းပြအဖြစ် ကျွမ်းဘားအားကစားရုံ (ကျိုက္ကဆံကွင်း) တွင် ရန်ပုံငွေ လစဉ်ပေးသွင်း၍ သင်ကြားခဲ့ရာ ၅ နှစ်နီးပါး သင်ကြားခဲ့ရာ၌ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် မိမိအပါအဝင် အခြားနည်းပြများ ၊ ကလေးမိဘများအတွက် များစွာ အခက်အခဲ ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာများကို တင်ပြလိုပါသည်။
သင်လာရင်းနဲ့အတန်းထဲမှာ ကလေးတွေ တဖြည်းဖြည်း တော်တော်များလာခဲ့တယ်။
ကလေးတွေ များလာတော့ လူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း မနာလိုတွေဖြစ် သူတို့ပဲ လိုချင်၊ လုပ်ချင်လာတယ်….
ဒါနဲ့ပဲ ၂၀၁၈ အစကတည်းက ယာယီအတွင်းရေးမှူးမှ စတင် နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး အကျင့်ယုတ်ပါတော့တယ်…
၁။ ပထမဆုံး ကစားရုံ အသစ်နဲ့အဟောင်း ၂ ခုရှိတာကို ထားထက် ကလေးတွေ အသစ်မှာကစားလို့မရဘူး၊အဟောင်းမှာပဲ ကစားရမယ်ဆိုပြီး ကလေးချင်းခွဲခြား၊ ဆရာချင်းခွဲခြားနဲ့ ဒါစည်းကမ်းပါ ဆိုပြီး စတယ် (ထားထက်ဆီမှာဆော့တဲ့ကလေးက နိုင်ငံခြားသားများပါတယ်။)
၁၀။ ၂၀၁၉ January မှာ နင်တို့သင်တဲ့အဖွဲ့ February တလလုံးဖွင့်လို့မရဘူး။ ပိတ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တွေလိုပဲ သင်နေတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဆိုသူက ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ဘာလို့လဲမေးတော့ ဆရာမက ကျောင်းသားတွေကို တလလုံးသင်ရမှာမို့တဲ့၊ နင်သင်တဲ့အချိန်နဲ့ ကွက်တိပဲမို့ ၊ ငါလဲသင်လို့မရဘူး ပိတ်ပေးရမှာဆိုပြီးပြောတော့ ဒါဆိုရင်စာထုတ်ပေးပါ ပိတ်ခိုင်းတဲ့သူရဲ့လက်မှတ်နဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကစာထုတ်ပေးပါပြောတော့ လုပ်ကြံပြောနေကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာမထုတ်ပေးနိုင်ကြဘူး။ ဒီတော့မှ ဝိနည်းလွတ်အောင် ဒါဆိုလွတ်တဲ့နေရာ အခြားတဖက်မှာ ကစားပါဆိုပြီး အတွင်းရေးမှူး လုပ်သူက လှည့်ပတ်ပြောပြန်တယ်။ တကယ်တန်း ကျောင်းသားတွေကို သင်တာ တလလုံးမှာမှ ၃ ရက်ထဲ တရက်ကို ၁ နာရီပဲ သင်ခဲ့ကြတာ….. သတ်သတ် ဉာဏ်ဆင် ကလိန်ကကျစ် ကြခဲ့တာ။
၁၃။ ငှားခ ပိုက်ဆံသွင်းနေရာကနေ မယူတော့ဘူး အတင်းစလုပ်ကတည်းက အကွက်တွေရွှေ့နေပြီဆိုတာ သိနေလို့ ငှားခပေးပါမယ် ဆိုတာ လက်မခံခဲ့ဘူး၊ အဖွဲ့ချုပ် အသစ်ဖွဲ့တော့လည်း အချင်းချင်း လက်သိပ်ထိုး ရာထူးယူကြ အမျိုးမျိုး ညစ်ပြပြီး နည်းပြ အဖွဲ့တွေ အကုန် ကန်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကိုကစားခွင့်မပေးတဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြေလည်အောင် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုပြီး ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာတောင် လုပ်ပေးလို့ရရက်နဲ့ မလုပ်ပေးပဲ နည်းလမ်းမကျတဲ့စကားတွေသာပြောခဲ့ပါတယ်။
ယခုကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ် အသစ် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခင်ကျွမ်းဘား အဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု၊ အကျင့်ပျက် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုအပါအဝင် ပြစ်ချက်ပေါင်း (၁၄) ချက်ဖြင့် ယခုလက်ရှိ ဒု-ဥက္ကဌ အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်၍ တရားဝင်မျက်နှာစုံညီ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အများရှေ့တွင် ထုတ်ပယ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ထုတ်ပယ်ခံထားရသော နည်းပြဟောင်းမှ လက်ရှိတွင် ဒု-ဥက္ကဌ ရာထူးဖြင့် ဝင်ရောက်ချုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပါသည်။
ယခုလက်ရှိ ဒု-ဥက္ကဌမှာ ယခင်က အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူစဉ် အရှေ့တောင်အာရှပြိုင်ပွဲအတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ကစားသမားများနှင့်အတူ သွားရောက်စေခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှကျွမ်းကျင်သော ဒိုင်မရှိသော်လည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူထားသော ၎င်း၏အကိုဖြစ်သူကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းဘားဒိုင်လူကြီးဖြစ်ကြောင်း မဟုတ်မမှန်ပဲ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို လိမ်လည်ပြီး ဝတ်စုံစရိတ်နှင့် အထောက်အပံ့များ တောင်းယူခဲ့သဖြင့် ကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ်မှ ယခုလက်ရှိ ဒု-ဥက္ကဌအား ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါသည်။
၁၄။ အခကြေးငွေနဲ့ သင်လို့မရဘူး စာကပ်ထားလို့ သမီးကလေးတွေ အကုန်လုံးကို Free သင်ပေးမယ်…ပိုက်ဆံသွင်းရမယ်ဆို အဖွဲ့ချုပ်က ကလေးမိဘတွေဆီမှာကိုယ်တိုင် ကောက်ခံပါ… ထားထက်ထက်က ကလေးတွေကို အလကား သင်ပေးပါမယ်ပြောတာ မရဘူး။ ထားထက်ထက် ကလေးတွေကို ထားထက် ကိုယ်တိုင် သင်ခွင့် မပေးဘူး မသင်ရဘူး…ဘာလို့လဲ မေးတော့ Why? ဆိုတာကိုမမေးနဲ့ ဒါစည်းကမ်းပါတဲ့… ဆိုပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကို တင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Previous Article ကျောင်းဆရာက သားမယားပြုကျင့်လို့ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​​ကျောင်းသူ​လေး ကိုယ်​ဝန်​ရှိမှု
Next Article သူများနဲ့မတူ အလွန်ထူးခြားတဲ့ လက်ချောင်းပုံစံကြောင့် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျောင်းသားလေး